Askar Mareykan ah oo dhaawac dhanka maskaxda ah uu ka soo gaaray weerarkii Iiraan | Baahin Media Warka Somalia iyo Somalida
WARARKA MAANTA Askar Mareykan ah oo dhaawac dhanka maskaxda ah uu ka soo gaaray...
Askar Mareykan ah oo dhaawac dhanka maskaxda ah uu ka soo gaaray weerarkii Iiraan
Waaxda gaashaandhiga ee Mareykanka ee Pentagon ayaa waxay shaaciyeen in 34 askari uu dhaawacyo dhanka maskaxda ah uu ka soo gaaray weerarkii ay Iiraan ku qaaday saldhig uu Mareykanka ku leeyahay Ciraaq.
17 askari ayaa ilaa iyo imika ay ku socotaa qiimayn dhanka caafimaadka maskaxda ah.
Madaxwayne Donald Trump ayaa sheegay in uusan jirin askar wax ku noqotay weerarkaasi dhacay 8 January, islamarkaana weerar ay Iiraan kaga aargoosanaysay dilkii ay Mareykanka dileen Janaraal Qaasim Suleymaani.
Mr Trump ayaa xusay in weerarkaasi oo uusan khasaaroka dhalan darteed uu qaatay go’aanka ah in uusan dib weerar ugu qaadin Iiraan.
Balse toddobaadkii aanu soo dhaafnay, ayaa Pentagon-ka waxay sheegeen 11 askari la daaweeyay ka dib markii lagu arkay calaamado muujinaya in naxdin ay ka muuqato.
Mar toddobaadkan madaxwayne Trump oo ku sugnaa magaalada Davos, ee Switzerland, wax laga waydiiyay arrintan ayaa waxaa uu yiri “waan maqlay in askartaasi madaxa xanuunayo iyo waxyaabo kale, balse waxaan idin sheegi karaa ma aha mid halis ah.”
Jimcihi, ayaa waaxda gaashaandhiga ee Mareykanka afhayeen u hadlay Jonathan Hoffman waxa uu wariyayaasha u sheegay in 8 ka mid ah askarta ay arrintan saameysay Mareykanka dib loogu soo celiyay si loo daaweeyo.
Waxaa uu intaa ku daray in 9 askari oo kale lagu daweynayo Jarmalka.
16 askari ayaa iyaguna lagu daweeyay gudaha Ciraaq , ayna shaqadooda dib ugu laabteen.
Mr Hoffman ayaa xusay in wasiirka gaashaandhiga Mareykanka Mark Esper dhowr maalmood ka dib lagu wargaliyay dhaawaca maskaxeed ee askartan soo gaaray.
Mareykanka ayaa waxaa dalka Ciraaq ka jooga askar ay tiradoodu gaarayso 5000 oo askari.
Previous articleXOG: NISA oo sii daysay guddoomiye ku-xigeenka rugta ganacsiga gobolka Banaadir
Next articleIska horimaad caawa ka dhacay degmada Xamar-Weyne & Khasaare ka dhashay
Mo Farah oo shaaciyay inuu difaacan doono biladaha orodada sanadka 2020ka
Mustafe Cagjar oo Kudhawaaqay Hadal Naxdin Iyo Murugo Ku’abuuray Somali Badan
Guuldaro muujineyso in waqtigii siyaasada Erdogan kadhamaaday Turkiga oo laga dareemay Istanbul
Dhageyso”Taliska Booliska Soomaaliyeed oo faah faahiyey howlgallada & dhalinyaro badan oo lasoo xir xiray
Soomaaliland oo go aan siweyn loogu farxay ka qaadatay arin Shacabka dhibaato ku qabeyn
Guddoomiyaha Golaha Shacabka Oo Ka Hadlay Geerida Xildhibaan Ka Tirsanaa Baarlamaanka
Warbixin: Dhibaatada Dadweynuhu Kala Kulmaa Xir naan shiyaha Jidadka Muqdisho….